Maraakiib dagaal oo xalay duqeyn ku garaacay Degmada Qandala | Baydhabo Online
Maraakiib dagaal oo xalay duqeyn ku garaacay Degmada Qandala
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Degmada Qandala ee Gobolka Bari, Maraakiib dagaal oo ku sugan Xeebaha Degmadaasi ayaa xalay duqeeyay Magaalada Qandala.
Wararka waxa ay sheegayaan Maraakiibtaan oo ah kuwa ay leeyihiin ciidamada NATO ee la dagaalanka Burcad badeeda Somalida inay dhowr gantaal ku dhufteen gudaha Magaalada.
Dad fara ku tiris ah oo ku sugan Degmada Qandala, ayaa sheegaya in gantaalo culus ay ku soo dhaceen Magaalada, inkastoo aanan si rasmi ah loo ogeyn Khasaaraha rasmiga ah ee Duqeyntaasi ka dhashay.
Wararka ayaa sheegaya dagaalyahanada Xoogaga Daacish inay u firxadeen dhanka Buuraha ku dhaw Degmada Qandala, xilligii ay socotay duqeynta, balse markii ay istaagtay duqeynta ay dib ugu soo laabteen Magaalada.
Ciidamada Puntland ayaa wada dhaq-dhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee ku aadan sidii ay u qabsan lahaayeen Degmada Qandala oo ka tirsan Gobolka Bari, halkaasi oo Daacish muddo labo bilood ah ay maamulayaan.
Ciidamada Puntland iyo Xoogaga Daacish ayaa shalay galab ku wada dagaalamay deegaan duleedka ka ah Degmada Qandala, kadib markii Xoogaga Daacish ay soo weerareen ciidamada Puntland oo ku mashquulsanaa miino saaris.
Daacish waxa ay isku dayeysaa inay difaacato Magaaladan oo ku taalo dhul xeeb ah, dhinacna ay ka xigaan dhul buuro ah.